Vavanya izixhobo zakho ngokulula ngeAdobe Shadow | Martech Zone
Vavanya izixhobo zakho ngokulula ngeAdobe Shadow
NgoMgqibelo, ngo-Epreli 28, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Ukuba ukhe wavavanya indawo kwizikhangeli eziphathwayo kunye nezethebhulethi, kunokuba nzima kwaye kudle ixesha. Ezinye iinkampani zize nezixhobo zokulinganisa ukuhanjiswa kwezixhobo, kodwa azikaze zifane nokuvavanywa kwisixhobo ngokwazo. Bendifunda Iphephancwadi loMyili weWebhu namhlanje kwaye ndafumanisa ukuba iAdobe isungulwe shadow, Isixhobo sokunceda abayili ukudibanisa kunye nokusebenza nezixhobo ngexesha lokwenyani.
Ekuboneni kuqala, khange ndichukunyiswe yindlela yokuvumelanisa… ngubani okhathalayo ukuba ndingacofa kwindawo kwaye zonke izixhobo ezibhangqiweyo zitshintshele kwelo phepha. Eyona nto ibalulekileyo; Nangona kunjalo, kukukwazi ukujonga kunye nokusebenzisa umthombo wemveliso nganye ngqo kwi-desktop yakho. Oku kuyakwenza ukuba nawuphina umyili akwazi ukusombulula ingxaki ngokulula kunye nokugqibezela uyilo lwabo.
Kubaqulunqi ababandakanya uyilo oluphendulayo, oku kuluncedo ngakumbi! Uyilo oluphendulayo luhlengahlengisa kubungakanani besixhobo sakho kunokuba umane ukhomba isikhangeli kumxholo owahlukileyo okanye iphepha lesitayile. Ziye zithandwa kakhulu kumzi mveliso. Ngolwazi oluthe kratya, unokufunda inqaku ku Imagazini eSmashing kuYilo lweWebhu oluPhendulayo.
umxokozelo I-Adobe Shadow yeMac okanye yeWindows. Ikwafuna i Ukwandiswa kweGoogle Chrome kunye neapps ehambelana nayo nganye yezixhobo zakho.
tags: isithunzi se-adobeuvavanyo lwebrawuzaipad isikhangeliUvavanyo lwe-ipadisiphequluli sefowuniukuvavanywa kwesikhangeli esiphathwayodesign ezwayoi safariukuvavanywa kwethebhulethi
Impembelelo zoPhononongo lwe-Intanethi
Ukunyuka kweeNethiwekhi ezibonwayo zeNtlalo